I-Boolean Logic kunye neeGates zeLogic ze-Elektroniki
Kwizinto zombane zedijithali, Ingqondo yeBoolean ibhekisa ekuqhubeni amaxabiso okubini apho u-1 emele umxholo we yinyani Kwaye u-0 umele umxholo we Ubuxoki .
Iziphumo ebezingalindelekanga zokudubula kwe testosterone
Kwimijikelezo ye-elektroniki ephumeza ilogic, amaxabiso ebhanari amelwe ngamanqanaba ombane. Kwindibano yesiqhelo, ixabiso le-binary elinye limelwe ngu-5 V (ekwabizwa ngokuba PHAKAMILEYO ), kunye ne-zero zero imelwe ngu-0 V (ekwabizwa ngokuba NGAPHANTSI).
Olu hlobo lwengqondo lubizwa ngokuba Ibhoolean kuba yaqanjwa ngenkulungwane ye-19 nguGeorge Boole, isazi sezibalo nesiNgesi. Ngo-1854, wapapasha incwadi enesihloko Uphando lweMithetho yokuCinga, eyabeka iikhonsepthi zokuqala ezaye zaziwa njenge-Boolean algebra, ekwabizwa ngokuba yingqondo yeBoolean.
Ingqondo yeBoolean iphakathi kwemigaqo ebaluleke kakhulu kwiikhompyuter zala maxesha. Ke, uninzi lwabantu luthatha uBoole njengoyise wesayensi yekhompyuter.
Kwingcinga yeBoolean, yinyani imelwe ngamanani okubini 1 kunye Ubuxoki ngamanani okubini 0. Ukusebenza okunengqiqo (ekwabizwa ngokuba imisebenzi efanelekileyo) yimisebenzi enokusetyenziselwa into enye okanye ngaphezulu kokufaka kunye nokuvelisa imveliso enye.
Olunye lolona hlobo luxhaphakileyo lomsebenzi we-logic HAYI, ejika nje imeko yegalelo layo. Ngamanye amagama, ngo (~ # ~) hayi (~ # ~) ukusebenza, ukuba igalelo liyinyani, iziphumo zibubuxoki; ukuba igalelo alixoki, iziphumo ziyinyani.
UKUYA Isango isekethe okanye isixhobo esisebenzisa umsebenzi onengqondo. Yiyo loo nto, isango ESINGESETYHANA sisiphaluka okanye isixhobo esisebenza ngokuvakalayo HAYI ukusebenza. HAYI amasango aqheleke kakhulu kwiisekethe zedijithali.
Unokwenza amaswitshi esango ngeendlela ezahlukeneyo. Eyona ndlela iqhelekileyo isebenzisa ii-transistors njengokutshintsha, zilungiswe ngohlobo lokuba iziphumo ezichanekileyo zenziwe ngokusekwe kwigalelo elinengqiqo nohlobo lwesango elenziwayo.
Nokuba yeyiphi na indlela esetyenzisiweyo ukwenza iisekethe zesango, zonke iisekethe ezinengqondo zixhomekeke kumanqanaba ombane ahlukeneyo ukumela u-1 kunye no-0. V. Isiginali engu- + 5 V idla ngokubizwa njenge PHAKAMILE, kwaye umqondiso we-0 V uhlala ubizwa ngokulula NGAPHANTSI.
Ambien cr icala lesiphumo
Zisixhenxe zeentlobo eziqhelekileyo zamasango enengqondo zezi: HAYI, NO, OKANYE, NAND, NOR, XOR, kunye neNXOR. Onke la masango ngaphandle KOKUBA akawasebenzisi amagalelo amabini ubuncinci; isango HAYI linegalelo elinye nje.
HAYI Ukungenisa igalelo (OKUPHAKAMILEYO KUPHANTSI, PHANTSI kube PHAKAMILE)
KUNYE Iziphumo EZIPHAKAMILEYO ukuba lonke ungeniso luphezulu; kungenjalo, iziphumo
OKANYE Iziphumo EZIPHAKAMILEYO ukuba ubuncinci begalelo elinye liphezulu; kungenjalo,
NAND Iziphumo EZIPHAKAMILEYO ukuba lonke ungeniso LUPHANTSI; kungenjalo, iziphumo
OKANYE Iziphumo EZIPHAKAMILEYO ukuba ubuncinci begalelo elinye LIPHANTSI; kungenjalo,
XOR Iziphumo EZIPHAKAMILEYO ukuba inye, kwaye inye kuphela, yegalelo elo liphezulu;
kungenjalo, iziphumo NGOKUPHANTSI
Ukhutshiwe Iziphumo EZIPHAKAMILEYO ukuba inye, kwaye inye kuphela, yegalelo NGOKUPHANTSI;
i-montelukast sod 10 mg
Ngaba i-acetaminophen ifana netylenol
Uyipela njani ibenadryl
idosi enkulu ye-seroquel
I-ciprofloxacin 500 mg ithebhulethi